Alexis Sanchez, James Rodriguez & Shan Xiddig Oo Eden Hazard Ka Bedeli Karta Chelsea Haddii Uu U Wareego Real Madrid | Hangool News
April 11, 2017 - Written by Hangool
Mustaqbalka Eden Hazard ee Chelsea ayaa ah mid shaki la gelinayo iyadoo Real Madrid ayaa isku diyaarineyso inay heshiis rikoor jabin ah ku dalbato xiddiga reer Belgium.
Real Madrid ayaa ka dhigtay Hazard bartilmaameedkeeda koowaad marka uu bisha July dib u furmo suuqa kala iibsiga xagaaga, iyadoo Real Madrid ay dooneyso in lacag kaash ah iyo Alvaro Morata inay ku soo bedelayo Hazard iyadoo heshiiskaas lagu qiyaasay 120 milyan ginni wadar hanaatiisa.
Si kastaba, waxaa lagu waramayaa in Blues ay iyadana qandaraas cusub u soo bandhigeyso 26 jirkaan isagoo qaadan doona mushahar gaaraya 300 kun ginni taasoo ka dhigi doonta xiddiga ugu mushaharka badan kooxda reer London.
Laakiin haddii ay dhacdo lama filaanka oo uu Hazard u wareego Real Madrid, kumaa ka bedeli kara Chelsea?
Jariirada Daily Mirror ayaa soo xushay shan xiddig oo buuxin kara booskaas.
Waa 28 jir u ciyaara kooxda Inter Milan iyadoo xiddiga reer Croatia lagu qiimeeyay 51 milyan ginni, inkastoo Nerazzurri aysan dooneynin inay si sahlan ku fasaxdo xiddigeeda.
25 jirkaan khadka dhexe boos joogta ah kama heysto Real Madrid waxaana laga yabaa inuu xagaaga isaga tago Santiago Bernabeu, laakiin Chelsea ayaa kula dagaalami doonta saxiixiisa kooxaha Liverpool, Manchester United iyo Bayern Munich.
Weeraryahanka Arsenal ee reer Chile waxaa dhawaan lala xiriiriyay kooxaha ugu waa weyn England iyadoo tababaraha Chelsea Antonio Conte uu ka dhigtay xiddiga reer Arsenal xiddigaha ugu horeeya liiskiisa suuqa kala iibsiga.
Labada kooxood ee Manchester ayaa iyagana ka mid ah kooxaha xiiseynaya, iyadoo Inter iyo Juventus ay sidoo kale doonayaan.
22 jirkaan garabka uga ciyaara kooxda Talyaaniga ee Sassoulo waxaa lagu qiyaasay qiimihiisa lacag ku dhow 20 milyan ginni, laakiin waxa ay Chelsea tartan la geli doontaa kooxaha Inter Milan iyo Juventus.
Antonio Conte ayaa la rumeysan yahay inuu taageere weyn u yahay xiddigaan garabka ka ciyaara isagoo 22 jirkaan siiyay kulankiisii ugu horeysay ee Italy sannadkii hore.
Weeraryahanka Fiorentina waxaa lagu qiimeeyaa 20 milyan ginni, waxaana uu kooxda Serie A ka dhisan u dhaliyay 10 gool 22 kulan uu ku soo bilowday.